Apple ga - ere iPhones nde 227,5 n'afọ a | Akụkọ akụrụngwa
Apple ga - ere iPhones nde 227,5 n'afọ a
Companylọ ọrụ nyocha ahịa na nyocha ụlọ ọrụ TrendForce ekwuola na akụkọ na Apple ga-ere ihe iPhone 227,5 nde ngwaọrụ iPhone n'afọ a, nke ga - apụta uto nke 5,6% ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ ndị a ga-ekpughe a uto nke kariri onu ogugu nke mpaghara a nke smartphones, nke a na-eme atụmatụ na 4,8 pasent maka afọ a.
Ihuenyo OLED nke iPhone X, isi ihe na uto a
Dabere na TrendForce, Apple ga - ere nde iPhones nde 227,5 n'afọ a nke ga - anọchite anya uto nke 5,6% karịa afọ gara aga, yana 0,8% karịa nkezi uto nke mpaghara ama ama ụwa. Companylọ ọrụ ahụ nwere olile anya na Ahịa nke ụdị iPhone X nke, n'ụzọ doro anya, ga-ejikọta ihuenyo OLED, dị mkpa ọ bụghị naanị maka AppleMana maka ụlọ ọrụ ama ama dum.
N'etiti atọ emume ncheta iPhone nke atọ ga-ewepụta, ụdị 10-inch kacha elu ga-abịa na ngosipụta AMOLED. Iwebata nke AMOLED iPhone ga - enyere aka mee ka AMOLED doo ya anya na ahịa ama. TrendForce na-ebu amụma na ihe dịka 5,8% nke smartphones zigara n'ụwa niile na 43 ga-egosipụta ngosi AMOLED.
Ma, ọ bụ ezie na Apple abụghị mgbe niile ụlọ ọrụ mbụ na-anabata teknụzụ ọhụụ, ọ bụ mgbe ọ na - eme ka ọtụtụ teknụzụ dị otú ahụ nakweere, nke a bụ ihe ga - eme dị ka TrendForce si kwuo.
N'aka nke ọzọ TrendForce na-atụ anya na ọdịdị ihu technology, nke enwere ike ịkpọ Face ID, nwekwara mmetụta yiri ya na idochi teknụzụ a na nke ọzọ.
A na-eme atụmatụ ọnụahịa zuru ụwa ọnụ maka 3D usoro ihe eji arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka iru $ 1.500 na 2017 ma buru amụma na ọ ga-ahụ nnukwu uto nke 209% ruo ihe dịka $ 14.000 na 2020.
N'ikpeazụ, Strategy Analytics na-ekwu na Apple ebubatala iPhones ruru otu ijeri 1.200 site na ihe atụ mbụ na 2007 site na nkeji nke abụọ nke 2017.
Ma mgbe amụma amụma maka iPhone na-esote na-edekọ ọnụ ọgụgụ, na Steve Jobs aterlọ ihe nkiri ndị nta akụkọ na-abanye n'ime ma ọ fọrọ nke nta ka ihe niile dị njikere maka Isi Okwu nke iPhone X nke anyị ga-edebe gị nke ọma na Actualidad Gadget.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Apple ga - ere iPhones nde 227,5 n'afọ a
Soro Apple Keynote bi na anyị
Apple's Wireless Charging Pad abụghị Keynote-dị njikere na iPhone X